Ogaden News Agency (ONA) – Britain oo Xoghaye Cusub oo Arimaha Dibada Yeelatay.
Britain oo Xoghaye Cusub oo Arimaha Dibada Yeelatay.
Xoghayihii caafimmaadka ee dalka Britain ninka lagu magacaabo, Jeremy Hunt ayaa loo magacaabay xilka Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Britain, kadib markii uu xilkaasi iska casilay Boris Johnson oo ahaa Wasiirkii hore ee xilka baneeyay.
Theresa May, Ra’iisul wasaaraha dalka Britain ayaa la kulantay cadaadis xoogan oo kaga imaanayay xisbigeeda dhexdiisa, taasi oo ku saabsaaneyd qorshaha ay ku wajahayso ka bixida Midowga Yurub (EU).
Magacaabida wasiirka cusub ayaa timid, kadib markii Boris Johnson uu sheegay in uusan la dhacsaneyn qaabka Theresa May ay u wajaheyso ka bixida Midawga Yurub, waxaana uu noqonayaa mas’uulkii labaad ee iscasila muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah. Waxaa horay isu iscasilay Mr David Davis oo Britain u qaabilsanaa wadaxaajoodka ka bixitaanka Midowga Yurub oo xilkan loo magacaabay sanaddii 2016 dii.
Arrintan ayaa carqalad horleh ku noqonaysa qorshaha Britain ay uga baxayso Midowga Yurub, iyadoo ay sagaal bilood oo kaliya ay ka hadhay xilligii loo asteeyay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub.
Theresa May ayaa waxaa kale oo ay sheegtay in aysan habooneyn in xildhibaanada xisbigeeda ay ku kala qeybsamaan ka bixida Midowga Yurub, iyadoo ka digtay in awooda uu la wareego hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha, Jeremy Corbyn.